လူနေထိုင်ခွင့်မရသေးသည့် အဆောက်အအုံတွင် တိုက်ခန်းငှားနေထိုင်ခဲ့လျှင် — YgnHome.com
Currency Any သိန်း MMK	$
ဗမာစာ English 简体中文 繁體中文 日本語 한국어 Français Deutsch Nederlands ไทย Tiếng Việt Español Italiano Русский العربية Беларуская мова বাংলা Български Harshen Hausa हिन्दी Basa Jawa ພາສາລາວ Bahasa Melayu Português ਪੰਜਾਬੀ தமிழ்
ဆောင်ရွက်နည်း	ပိုင်ဆိုင်မှု	ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု
၂၀၂၀ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်းရဲ့ ပုဒ်မ - ၂၅ မှာ အသုံး ပြုသည့် ဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေရလမ်းတင် ပြနိုင်သည့်ဝင်ငွေရှိပါက ယင်းဝင်ငွေ အားနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်စည်းကြပ်မှုမှ ကင်းလွတ်နေသော ဝင်ငွေပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်းမတင်ပြနိုင်ပါက အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေပေါ် တွင်လည်းကောင်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်”
USD & SGD Exchange Rate
Copyright © 2016 - 2019 YgnHome.com. All rights reserved.
Interested this property? Chat with us